Equinix NY4 Kubva FXCC | Ita Forex Latency Chimwe Chezvakaitika
XL Account ECN
ECN XL - Account Zero
musha / About / Nei FXCC / Equinix Data Center
Kuita Latency Chimwe Chezvakaitika Kare
Saka iwe une PC yekare uye yakanyanya. Matani ekugadzirisa kasiki, makomo eR RAM uye amai vemakambani ose ekubatanidza. Dambudziko nderekuti, forex yako yekutengeserana inotenderera pane teknolojia yako forex broker inoshandisa kutumira mirairo yako kune uye kubva kumisika. Slow server speed uye latency inogona kudyira muhutano hwako hwekutengesa. Mumutengesi uyu, nguva ndeyemari.
Pano paFXCC tinozvirumbidza pakupa hutano hwakanakisisa hwevatengi vedu kutengeserana. Yakawedzerwa mairi muzvivakovheni ndeye FXCC NY4 Equinix MT4 server.
Sangano reE Equinix NY4 riri panzvimbo yekutamba uye inobva kuWall Street, mumoyo weNew York. Kuburikidza nehutaneti hutaneti, FXCC forex ECN broker inopinda muEquinix Financial Exchange. Matengesheni ako ikozvino chikamu chekubatanidza kwemashamba ekutengeserana nemaseva ebhengi, ari muIncinix data centers.
Nguva chaiye mari mumashamba emari uye ndiani ane nguva yekumirira mavhavha ekurumidza kuita mirairo yako?
Equinix NY4 Data Center kubva kuFXCC. Simba Rokuita Iwe Chikamu CheMusika Wokutanga.
Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) inotungamirirwa neVanuatu Financial Services Commission (VFSC) ine nhamba yelayisensi 14576.
Copyright © 2019 FXCC. Zvose Zvakachengetedzwa.